Global Voices teny Malagasy » Mujeres Mundi, “Ahoana Ny Anjara Toeran’ny Vehivavy Eo Amin’ny Fiarahamonina Misy Anao?” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Septambra 2012 4:22 GMT 1	 · Mpanoratra Silvia Vinas Nandika (en) i Alan Bailey, Andriamifidisoa Zo
Tafatafa nifanaovana fizarana faharoa sady farany.
Amin'ny alalan'ny endrika biografia, Mujeres Mundi dia fanomezam-boninahitra ny vehivavy : amin'ny maha-reny, mpiaro ny zon'olombelona, artista, mpizaha tany, tia mandehandeha amin'ny tany tsy fantatra… mba te-ho hafa.
Amin'ny fizarana voalohany [teny malagasy], no niresahan'i Xaviera Medina de Albrand ny bilaoginy, Mujeres Mundi  [Tontolon'ny Vehivavy], izay amoahany ny tafatafa nifanaovany tamin'ny vehivavy manerana izao tontolo izao. Amin'ny fizarana faharoa no iresahan'i Xaviera ny lanjan'ny fampielezana ny tafatafa nifanaovany tamin'ireo olona zatra fiteny hafa. Resahiny eo ihany koa ny tetikasa manokana nampitondrainy ny lohateny hoe “Ahoana ny anjara toeran'ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina misy anao?”
Azo vakiana amin'ny teny anglisy, frantsay ary espaniola ny Mujeres Mundi. Ianao ihany ve no nanao ny fandikan-teny?
Eny. Ahy hatrany am-paladia ka hatreny an-tampon-doha ny tetikasa, ahy ny fandikanteny, na dia efa nolazaiko aza, fa mety hisy fahadisoana amin'ny teny frantsay sy teny anglisy, ary miala tsiny amin'izany aho. Tahaka ilay olona manana anarana Salvatore ao amin'ny sarimihetsika mitondra ny lohateny hoe ‘The Name Of The Rose’ [Ny Anaran'ny Raozy] aho, mieny amin'ny fiteny maro fa tsy iray fotsiny amin'ny fotoana iray!
Nahoana no nanapa-kevitra ny hanao dikanteny izay navoakanao ianao?
Mety ho mora kokoa raha amin'ny teny espaniola fotsiny no amoahako lahatsoratra, na dia mitafatafa amin'ny fiteny hafa aza. Tsy ny miteny no sarotra fa ny mametraka azy rehetra ao anaty lahatsoratra iray, ary indrindra amin'ny fiteny tsy andavanandroko. Saingy tiako ho fantatry ny vehivavy tsy miteny espaniola (ary izay ny ankamaroany) fa manoratra momba azy ireo aho. Faharoa, tiako ho maromaro kokoa ny olona afa-mamaky ny tantarany, ary mety ho maro ihany koa ny olona mety ho te-hahalala azy ireny, sy ho fanentanana avy amin'ny ohatra nasehon'izy ireo. Rojo io, arakaraka ny hahazoana mmpamaky betsaka kokoa no mahatsara azy.
Misy zoro eo amin'ny bilaoginao mitondra ny lohateny hoe “Ahoana ny anjara toeran'ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina misy anao?” Mba lazalazao anao bebe kokoa ny momba azy io.
Miompana amin'ny fomba fijerin'ny fiarahamonina maro ny vehivavy izy io. Indraindray isika manangana hevi-piarahamonina iray saingy mifanohitra amin'ny zava-misy io hevitra na fomba fijerin'ny fiaraha-monina io. Amin'ny alalan'ny fomba fijery manokana no itondrako ny fomba fijery [vilana] isan-karazany ataon'ny fiarahamonina amin'ny vehivavy raha ampitahaina amin'ny tena anjara toerana misy azy.
Inona ny tanjonao amin'ilay tetikasa?
Telo ny tanjon'ity tetikasa ity:
a. Manentana sy manaitra momba ireo karazana fomba fijery foronin'ny haino aman-jery sy fikambanana [fiarahamonina] hafa isian'ny fanajana ireo vehivavy amin'ny kolontsaina isan-karazany.
b. Hanome endrika ny vokatsoa azon'ny fiarahamonina amin'ny fandraisana anjaran'ny vehivavy mihamiroborobo eo amin'ny sehatra ara-politika, ekonomika ary ara-piaraha-monina.
c. Hanome endrika ny olona iraisana mianjady amin'ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina misy azy, sy ny fomba anentanana ny tanora handray anjara amin'ny famahana ny olana sasany amin'ireny olana ireny.
Mitozo manao fikarohana hatrany aho aty amiko aty. Nieritreritra aho fa afa-miantso ny daholobe handray anjara an-tsoratra na sary ny anjara toeran'ny vehivavy eo amin'ny fiaraha-monina misy azy, sy hizara raha inoany fa misy fomba fijerin'ny fiarahamonina efa tsara petraka amin'izy ireny. Mbola mila asa ny fanehoana amin'ny alalan'ny fira (grafika) amin'izao fotoana izao, nieritreritra aho ny hanao lahatsary miaraka amin'ny saripika ampiarahana amin'ny fikarohana. Hozaraiko amin'ny fikambanam-behivavy na amin'izay rehetra liana amin'ny ny voka-pikarohana.
Ahoana ny fomba andraisan'ny olona anjara amin'ny “Ahoana ny anjara toeran'ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina misy anao?”
Tsotra. Mandefa sary (saripika, lahatsary na kisarisary) mampiseho ny fomba fijery mafy orina ao amin'ny fiarahamonina sy ny satan'ny vehivavy amin'izany fotsiny izy ireo, ary ny andraikitry ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina.
Farany, hatraiza ny fijerinao ny Mujeres Mundi rahampitso? Mieritreritra ny hamoaka ireo tafatafa ireo amin'ny boky na endrika hafa ve ianao?
Mbola an-dalana ny dingana voalohan'ny tetikasa, ny famoahana an-tserasera. Eny ao anatin'ny herintaona sy tapany, hapetraka anaty boky ny lahatsoratra sy ny mombamomba olona vitsivitsy. Saingy ny tanjona farany (tanjona lavitr'ezaka) dia ny hanangana tahirin-kevitra ahitana ireo vehivavy nifampitafatafàna, ka andaniana efatra ka hatramin'ny dimy minitra ny tsirairay. Efa ao an-dohako ny hanangana gazety-boky sy fikambanana Mujeres Mundi, saingy mbola asa goavana izany ary mila ekipa sy famatsoana lehibe. Ao anatin'ny dingana voalohany no ahafahako manabe voho ny lanjan'ny Mujeres Mundi, ary dia afaka ny miditra amin'ny dingana manaraka aho avy eo!
Azonao arahina i Xaviera sy ny Mujeres Mundi ao amin'ny Twitter  sy Facebook .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/09/07/38047/
 fizarana voalohany : https://mg.globalvoicesonline.org/2012/09/07/38059/